Sidee si ay u gudbiyaan Video, Xiriirada, Photos iyo Music ka iPod in Android
Sidee si ay u gudbiyaan Video, Xiriirada, Photos, Calendar, iMessages iyo Music ka iPod in Android
Hab fudud si ay u gudbiyaan files u dhexeeya qalabka ku dhufto badan, iPod in phone Android ama kiniin ah, waa inay leeyihiin qalab xisbiga saddexaad. Sidaa daraadeed, laguu suurogeliyo in aad jiidi oo hoos u files iPod, sida music, videos, sawiro, si ay Android aad telefoon ama kiniin fudayd ku raacin. Ma kula tahay in aad waxaa ku jira nooc ka mid ah qalab xisbiga saddexaad? Waxa hubaal ah. Waxaa jira inay dhaceyso xaq ah mid ka mid ah - Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac . Qaybo The waakanaa yeelan doonaan dhamaystiran ah soo bandhigo oo ku saabsan sida loo isticmaalo ee aalad xisbiga saddexaad si ay u gudbiyaan files ka iPod in qalab Android.
Mid ka mid ah Riix si ay u gudbiyaan iPod in Android
Iyadoo Wondershare MobileTrans ah, aad awoodi doonaa inay xawilaan music, video, sawiro iyo xiriirada ka iPod in phone Android ama kiniin si fudud.
Transfer iyo badalo songs, Lugood U, Movies, Podcasts, TV muujiyaa ka iPod xiriiri qalab Android
Copy oo dhan xiriirada badbaadiyey on iPod iyo daruur ay ka mid yihiin Google, iCloud, Yahoo! oo dheeraad ah si ay u qalab Android
Jadwalka iyo iMessages ka dhaqaaq iPod in phone Android
La jaan qaada iPod xiriiri 5/4/3 macruufka orodka 9/8/7/6/5, HTC, Samsung, LG, Sony iyo qalab Android ka badan.
Tag Wondershare MobileTrans u Mac Markii computer Mac ah.
Easy in ay wareejiso
No talaabooyin adag. Just mid click, dhammaan xogta ku saabsan iPod waxaa loo wareejin doonaa.
Ma aha oo kaliya Saxiixa Music
Waxay ku siisaa awood ay ku wareejiso oo dhan audio, video, sawiro, xiriirada, jadwalka iyo iMessages ka iPod in qalab Android.
Riteen Support aaladaha Android
Qalab badan oo Android, sida Samsung, Motorola, LG, HTC, Sony iyo ka badan, waxaa lagu si buuxda u taageeray.
Taageer Sidayaasha badan Phone
Macna ma laha hadii aad haysato heshiis kula qaran, AT & T, T-Mobile iyo Verizon, waxay kaa caawinaysaa in aad ku dhameysan iPod inay kala iibsiga Android fudud.
macruufka 5, macruufka 6, macruufka 7, macruufka 8 & macruufka 9
Laga soo bilaabo Android 2.1 in Android 6.0
macruufka 5, macruufka 6, 7 & macruufka macruufka 8
iPod inay kala iibsiga Android ma noqon karo fudud. Baro faahfaahinta hoos ku >>
The version Mac ma taageeri Nokia (Symbian) telefoonka.
Bedelka Music, Video, Photos, iMessages, Calendar & Xiriirada ka iPod in Android
Si aad u wareejin iPod xiriir la taabto si Android phone ama kiniin ah, waxaad saxiixi kartaa in xisaab-aad, sida iCloud, Google, Hotmail, iwm, ee Wondershare MobileTrans sidoo kale ku wareejin doono xiriirada in xisaabaadka kuwa si phone Android ama kiniin.
Tallaabada 1. Orod Barnaamijka
Ku rakib oo ay maamulaan Wondershare MobileTrans ku computer Windows. Si aad iPod ay u kala iibsiga Android, waxaad u baahan tahay riix Start inuu soo galo suuqa kala iibsiga telefoonka.
Fiiro gaar ah: Ku rakib Lugood on computer Windows si loo hubiyo in shaqada qalab arinkan si guul leh.
Tallaabada 2. Isku Your iPod iyo Android Device iyo Orod Barnaamijka
Bareesada galay fiilooyinka USB ah in labada mid ah iPod iyo Android qalab ku xiran hesho. Markaas, labada qalabka muujiyaan ilaa in ka MobileTrans uu furmo suuqa.
Tallaabada 3. Start si ay u gudbiyaan iPod in Android
Skaanka files ay taageerayaan si loo hubiyo in wixii aad ku socoto si ay u gudbiyaan. Ka dib markii aad loo xaqiijiyo waxa loo gudbin doonaa, riix Start Copy . Kor u siisa wada hadal ah, oo aad ka eegi kartaa boqolkiiba bar horumarka. Marka iPhone ay u kala iibsiga Android dhamaato, riix OK .
Faylal ay ka iPad dhaqaaq Android
Bedelka Music ka iPod in iPad
Ka iPod Demi Data in Phone
Demi Data ka iPhone si iPhone
Maxaa ka duwan Android ka iPhone
> Resource > iPod > Sidee si ay u gudbiyaan Video, Xiriirada, Photos, Calendar, iMessages iyo Music ka iPod